နာကျင်မှုသက်သာစေရန် CBD Cream ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။ | အော်ဂဲနစ်လျှော်
လှည်း / 0.00 DKK 0
Organic Hemp အကြောင်း
CBD, CBD သတင်း
နာကျင်မှုသက်သာစေရန် CBD Cream ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
27. ဒီဇင်ဘာ 2021 27. ဇန်နဝါရီ 2021 တွင်တင်သည် mary ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
မောပန်းနေသောခြေထောက်များအတွက် CBD သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ပါ
သင်သည်အားကစားသမားတစ် ဦး သို့မဟုတ်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကြွက်သားကိုက်ခဲခြင်းသို့မဟုတ်ကြွက်တက်ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မည်။
သင့်ကိုနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်ဟုအထူးပြောခဲ့သည့်အထူးလိမ်းဆေးမုန့်ကိုသုံးပြီးပြောရင်ကော CBD လိမ်းဆေး.
ကောင်းပြီ၊ CBD ကြွက်သားများနာကျင်မှုနှင့်ကြွက်သားနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည့်စျေးကွက်တွင်စျေးကွက်အတွင်းရရှိနိုင်သည်။ ဤလိမ်းဆေးသည်အစွမ်းထက်သောလျှော်ပါဝင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသောအထူးကြပ်မတ် Cannabidiol နှင့်ကြွယ်ဝသည် CBD, Shea ထောပတ်နှင့်အခြားအကျိုးရှိသောသဘာဝကဆင်းသက်လာပါဝင်ပစ္စည်းများ။
ဤရွေ့ကားလိမ်းဆေးသို့မဟုတ်ဆီမွှေးသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ဒီဖွဲ့စည်းမှုက CBD, THC (သို့) နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုသောလျှော်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ကြွက်သားများနာခြင်းသို့မဟုတ်ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဤလိမ်းဆေးသည်အလွန်ထိရောက်သည်။
The CBD လိမ်းဆေး သင်ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ဆေးရည်အဖြစ်အသုံးပြုသောလိမ်းဆေးနှင့်ဆင်တူသည်။ CBD လိမ်းဆေး ကြွက်တက်ခြင်း၊ ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းများကိုသက်ရောက်စေသောကြောင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင်လူကြိုက်များလျက်ရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ့ရှိချက်အရ CBD ထုတ်ကုန်များသည်နာတာရှည်ကျောရိုး၊ အဆစ်နာခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊
CBD လိမ်းဆေးသည်နာကျင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန် (သို့) ယင်း၏ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ကောင်းမွန်သောအစားထိုးသလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်လာပြီ။
အချို့သောကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများနှင့်အေဂျင်စီများအရ CBD လိမ်းဆေးသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ၏အဓိကကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာ CBD လိမ်းဆေး ၎င်းသည်အဆစ်နာခြင်းနှင့်အဆစ်နာရောဂါဖြစ်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အားကစားသမားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသူဖြစ်ပါက CBD လိမ်းဆေးသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤ entry ကို CBD, CBD news တွင်တင်ခဲ့သည်။ အမှတ်အသား ပြုထားသည် ။
CBD OFFER: CBD paste Full-Spectrum 30% 3FOR2 တွင် mary ၏ မှတ်ချက်
cdd deutsch (၃)
CBD သတင်း (15)
CBd olje (norsk) (၂)
အမျိုးအစားခွဲခြား @da (၅)
ဇန်နဝါရီ 2022 (1)
ဒီဇင်ဘာ 2021 (1)
မေ 2021 (10)
မေ 2020 (၃)
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2020 (1)
ဖုန်းနံပါတ် +45 60 90 42 01
ဥရောပ - ၁-၅ ရက်
United Kingdom ၁-၅ ရက်
English	 German	 Norwegian	 Finnish	 Swedish	 Danish	 Spanish	 Italian	 German (Switzerland)	 French (France)	 French (Belgium)	 Dutch (Formal)	 Dutch (Belgium)	 German (Austria)	 Norwegian	 Myanmar
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်သွားကြည့်နေစဉ်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤကွတ်ကီးများထဲမှလိုအပ်သောအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောကွတ်ကီးများကိုသင်၏ browser တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး၎င်းတို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်နားလည်ရန်ကူညီသည့် third-party cookies များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ဤ cookies များကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သင်၏ဘရောင်ဇာတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့်၎င်း cookie များမှထွက်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။ သို့သော်အချို့သော cookies များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ browsing အတွေ့အကြုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပုံမှန်လည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောကွတ်ကီးများသည်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤအမျိုးအစားတွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများနှင့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကိုသေချာစေသည့် cookies များပါ ၀ င်သည်။ ဤ cookies များသည်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမသိမ်းဆည်းပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အထူးမလိုအပ်သည့်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ကြော်ငြာ၊ အခြား embedded ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အထူးအသုံးပြုသော cookies များကိုမလိုအပ်သော cookies များဟုခေါ်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဤ cookies များကိုမသုံးမီအသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။